अरुको घर सुधार्ने सन्तोष देउजालाई पत्निले गरिन् यस्तो गुनासो ! - समृद्ध नेपाल
अहिले पछिल्लो समयका एकदमै चर्चीत पत्रकार, युटुबर, तथा समाजसेवी सन्तोश देउजाको जीवन निकै नै अनौठो तथा दुस्खदायी रहेको छ । सानैदेखी निकै नै मेधावी छात्रमा गनिएका सन्तोश कक्षामा सधै प्रथम हुन्थे । वास्तवमा भन्ने हो भने उनले पढेको सायद घर परिवारका सदस्यले समेत थाहा पाउदैनथे । प्रायागरि सन्तोश घरका सबै सदस्य सुतेको बेला पढ्ने गर्थे।
सानैदेखी चतुर्याइ स्वभावका सन्तोष दिनभरि बाहिर साथीहरुलाइ क्र्याम्बोर्डमा भुल्याउथे अनि आफुचाहि रातभरि पढ्थे ।सन्तोशका बुबा नेपाल प्र,हरिको अवकासप्राप्त ब्यक्ति थिए । नेपाल प्रहरिको अवकाश पस्चात सन्तोशका बुबा छोराछोरीको भविश्यको लागी वैदेशिक रोजगारमा गएका थिए । भने उनकी आमा घरायसी काममै ब्यस्त रहन्थिन ।
जब सन्तोश कक्षामा भर्खर मात्र कक्षा ८मा प्रवेश गरेका थिए तव उनको किड्नीमा स्टोन भयो । अर्थात उनको किड्निमा ४२ ओटा स्टोन भयो । त्यसपछि उनको अ,प्रेसन भयो । त्यसबेलाको समयमा लगभग उनी छ महिना सम्म स्कुल जान पाएनन । जतिबेला उनी अस्पतालको बेडामा अफ्नै जीवनसङ्ग सङघर्स गरिरहेका थिए ।
त्रिशुलीमा ट्रक खस्यो !
न सुन्न सक्छिन नत बोल्न नै, तर संसार नै चकित पार्ने कला छ उनमा !
जति सक्दो चाडो खाली सिलिन्डर भरेर राख्न सबैलाई आग्रह !
यीनै इन्जिनियर हुन इन्जिनियर जसले दिनरात नभनी ठड्याए ऐतिहासिक धरहरा !
हिमानी शाह कोहि गरीब भोको नरहोस भनि भगवान सँग प्राथना गर्छु !
उदयपुरको कटारीमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको लगत संकलन ईकाई कार्यालय स्थापना !
रेड्मीको नेपालमा सस्तो फोन !
सौतेनी छोरीमाथि गरे यस्तो अनैतिक काम !
भ्रमण वर्षा २०२० उदयपुरमा पर्यटक बढाउन पुस १६ गते ‘राईड टु चौदण्डीगढी’
खुसीको खबर अब बागमतीमा फोहोर पानी नबग्ने !
कोरोना संक्रमणको प्रभाव शैक्षिक संस्थामा !